A4copy Pepa Kugadzira Line Vagadziri & Vatengesi - China A4copy Pepa Kugadzira Line Factory
Cheka SIZE YEMAHARA KUKOSHA (CHM A4-2 Cheka SIZE SHEETER)
EUREKA A4 otomatiki yekugadzira mutsara inoumbwa neA4 kopi pepa sheeter, pepa ream kurongedza muchina, uye bhokisi kurongedza muchina. Ndeapi anotora epamberi mapatya anotenderera banga kuenderana sheeting kuti ive chaiyo uye yakakwirira yekugadzira kucheka uye otomatiki kurongedza.
Iyi serie inosanganisira Yakakwira yekugadzira mutsara A4-4 (4 homwe) akacheka saizi sheeter, A4-5 (mashanu homwe) akacheka saizi sheeter.
Uye compact A4 yekugadzira mutsara A4-2 (2 homwe) akacheka saizi sheeter.
CHM chaiyo yekumhanyisa pepa rekucheka raishandiswa zvakanyanya kucheka bepa, senge renyanzvi pepa, pepa rekunyora, pepa reunyanzvi, laser bepa, aruminiyamu pepa pepa uye bhodhi. CHM muchina unotora yuro neTaiwan tekinoroji, inotora servo mota kutyaira, nyore kushanda nekubata skrini, izvo izvo zvinhu zvinoita kuti muchina wedu uve nemazvo uye nekumhanyisa uye ikave yakakurumbira mhando yemusika.
CHM-SGT akateedzana synchro-inobhururuka sheeter inotora yepamusoro dhizaini yemapatya helical banga ma cylinders ayo anotyairwa zvakananga neakakwira simba AC servo mota nekukwirira kwakaringana uye akachena akachekwa. CHM-SGT yaishandiswa zvakanyanya kucheka bhodhi, kraft bepa, AI laminating bepa, simbi bepa, hunyanzvi bepa, duplex zvichingodaro.
Cheka SIZE YEMAHARA KUKOSHA (CHM A4-5 Cheka SIZE SHEETER)
EUREKA, inoburitsa michina inodarika mazana matatu pagore, yakatangwa bepa ichishandura michina bhizinesi kweanopfuura makore makumi maviri nemashanu, zvakabatanidza kugona kwedu neruzivo rwedu mumusika wekunze, zvichiratidza kuti EUREKA A4 yekucheka saizi akateedzana ndiwo akanakisa mumusika. Iwe une yedu technical technical uye yegore rimwe garandi yemuchina wega wega.
Cheka SIZE YEMAHARA KUKOSHA (CHM A4-4 Cheka SIZE SHEETER)